Antonio Cassano oo laba-labayn badan kaddib ciyaaraha ka fariistay isagoo xaaskiisa eedaynaya!! – Gool FM
(Verona) 24 Luulyo 2017 – Antonio Cassano ayaa sida muuqata soo xirey buuggii waayihiisa ciyaareed kaddib markii marna ka baxayay marna kusoo noqonayay maalmihii yaraa ee ugu dambeeyay.
35-jirkan ayaa 10-kii bishan Luulyo heshiis la galay kooxda Hellas Verona balse wuxuu sheegay inuu ciyaaraha ka fariisanayo 8 maalmood uun kaddib, isagoo go’aankaa ka noqday saacado uun kaddib.
Maanta oo Isniin ah, waxaa markale Twitter-ka kasoo muuqatay farriin ay qortay xaaska Cassano.
Koowdii, Cassano wuxuu sheegay inuu ka tegayo Hellas balse aanu ka fariisanaynin ciyaaraha.
“Ma doonayo inaan ciyaaraha ka tago, si fudud ma dareensani inaan la sii wadan karo Hellas Verona…” ayuu Cassano ku yiri farriin ay soo tweet gareeysay xaaskiisa, Carolina Marcialis.
Yeelkeede, sidii uu horayba u yeelay bishii Luulyo, Cassano wuxuu soo qora farriin kale oo ay iyadana soo tweet gareeysay isla xaaskiisa oo uu ku sheegayo inuu ciyaaraha oo idil ka fariisanayo.
“Xaaskayga Carolina ayaa si khaldan u qortay, Runtuna waxay tahay inaan ciyaaraha ka fariisanayo,” ayuu yiri Cassano.
“Kubad dheeli maayo hadda kaddib. Waan raalli gelinayaa qof kasta oo ku sugan naadiga Hellas Verona – gudodomiyaha, macallinka, laacibiinta. Waxaan ahay 35 jir hadda, muhiimadeeyduna waa inaan u dhowaadaa xaaskayga iyo carruurteeyda.” ayuu qoray.
Cassano ayaa waayo baaxaa degayay kusoo qaatay kooxo ay ka mid yihiin Roma, Inter, Milan iyo Real Madrid, isagoo Talyaaniga goolal u dhaliyay Euro 2004 iyo Euro 2012, waxayna dad badani qabaan inuusan si wanaagsan uga faa’iidaysanin hibadiisa kubadeed oo ay baabi’isay dhaqan xumadiisa iyo shakhsiyaddiisa oo baaba’san.
RASMI: Chicharito oo dhammeystiray heshiiska uu ugu biirayo West Ham...+SAWIRRO